အတတ်ပညာ China တခါသုံး ဆေးဘက်ဝင်အိပ်ယာခင်း ခွဲစိတ်ခန်းသုံး အ၀တ်အထည်များ တခါသုံး Meidcal Drapes စက်ရုံနှင့် တင်သွင်းသူများ |Zhongxing
Cotton Bud ဘူးသီး Cotton Bud...
တစ်ခါသုံး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အိပ်ယာခင်းများ ခွဲစိတ်ခန်းသုံး အ၀တ်အထည်များ နှင့် တစ်ခါသုံး Meidcal Drapes များ
1.Material: အဆိပ်မရှိသော ploypropylene ပေါင်းစပ်ထားသော ယက်မဟုတ်သောအထည်
2.Size: 70-80cm အကျယ်၊80x180cm
4.Feature: အရေပြားနှင့် လိုက်ဖက်ညီပြီး စုပ်ယူမှု မြင့်မားသည်။
FOB စျေးနှုန်းUS $0.02 - 0.03 / အပိုင်း
Supply နိုင်ခြင်း:တစ်လလျှင် 1000000 Pieces/Pieces
ZHONGXING China သည် တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ တစ်ခါသုံးအသုံးအဆောင်များ။2002 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ပြီးကတည်းက ZHONGXING သည် ကျယ်ပြန့်သော ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှု၊ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဖောက်သည်များအား စဉ်ဆက်မပြတ် ဖောက်သည်များအား ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
10 နှစ်ကျော် တိုးတက်မှုများနှင့်အတူ၊ ZHONGXING အဖွဲ့သည် Medcial Bed Sheet ထုတ်ကုန်စီးရီးများကို ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် တင်ပို့ခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်လျက်ရှိသည်။
ZHONGXING သည် CE၊ ISO လက်မှတ်များပါရှိသော စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်လုပ်ငန်းတွင် အသုံးချနိုင်သည့် ပြည့်စုံသော ပင်မအရည်အချင်းများ အစုံအလင်ကို တီထွင်ခဲ့သည်-
ISO အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အောက်တွင်၊ ကုန်ကြမ်းဝင်လာခြင်း၊ ကုန်ကြမ်းအရောင်ချွတ်ခြင်းမှ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း၊ အရည်အသွေးအာမခံချက်အား တင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ပြီး အခါအားလျော်စွာ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။
Operational Excellence ၊
သင်၏အတိအကျသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောထုတ်ကုန်များ၏အဆက်မပြတ်ထောက်ပံ့မှုပေးစွမ်းနိုင်မှုသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်သင်ယူမှု၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။သင့်စျေးကွက်တွင် သင်၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
ခိုင်မာသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆက်ဆံရေးများသည် စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များနှင့် ပေးသွင်းသူများ ရင်ဆိုင်နေရသော စိန်ခေါ်မှုများကို နားလည်ရန် ကြိုးပမ်းပြီး ပွင့်လင်းသော ဆွေးနွေးမှုနှင့် အပြန်အလှန် လေးစားမှုကို အားပေးသည့် နည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။
သင်နှင့်အတူ လူသားဖြစ်တည်မှုအတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ စောင့်မျှော်နေပါသည်။အတူ။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အိပ်ရာခင်းတွင် အောက်ပါလက္ခဏာများ ရှိသည်။
* စိတ်မထိန်းနိုင်မှုမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
* အညစ်အကြေးများနှင့် အစွန်းအထင်းများကို ကာကွယ်ပေးခြင်း။
* ရောဂါပိုးထိန်းချုပ်ရေးတွင် အထောက်အကူပြုသည်။
* အသုံးပြုရအလွန်အဆင်ပြေပြီး ကပ်ထားခြင်းမရှိပါ။
* အရေပြားနှင့် လိုက်ဖက်ညီပြီး စုပ်ယူမှု မြင့်မားသည်။
* အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း။.
1. ငါတို့က ဘယ်သူလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ်နိုင်ငံ၊ Huaian တွင် အခြေစိုက်ပြီး 2002 ခုနှစ်မှ စတင်ကာ အာဖရိက (22.00%)၊ မြောက်အမေရိက (22.00%)၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း (21.00%)၊ တောင်အမေရိက (16.00%)၊ အရှေ့ဥရောပ (16.00%)၊ ပြည်တွင်းစျေးကွက် (1.00%)၊ အနောက်ဥရောပ (1.00%)၊ အရှေ့တောင်အာရှ (1.00%)။ကျွန်တော်တို့ရုံးမှာ စုစုပေါင်း လူ ၂၀၁-၃၀၀ လောက်ရှိတယ်။
2. အရည်အသွေးကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့အာမခံနိုင်မည်နည်း။
အစုလိုက်အပြုံလိုက်မထုတ်လုပ်မီ အမြဲတမ်း ထုတ်လုပ်မှုနမူနာ၊
Gauze Swab ၊ ချည်သားလိပ် ၊ Cotton Ball ၊ Face Mask ၊ Medical Bed Sheet ၊ Medical Cap စသည်တို့
4. အခြားပေးသွင်းသူများထံမှမဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ အဘယ်ကြောင့် ဝယ်ယူသင့်သနည်း။
10 နှစ်ထက်ပိုကျွမ်းကျင်သူအတွေ့အကြုံ;ကျွန်ုပ်တို့သည် ပစ္စည်းထောက်ပံ့မှုမှ ကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေရန်၊ ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချမှုအထိ သီးခြားလွတ်လပ်စွာ ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုကို နောက်ဆုံးရရှိနိုင်ပါသည်။
5. ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်သနည်း။
လက်ခံထားသော ပို့ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများ- FOB၊ CFR၊ CIF;
လက်ခံထားသော ငွေပေးချေမှုအမျိုးအစား- T/T၊ L/C;
၁လွှာတစ်ရှူး+၁ထပ် PE ရုပ်ရှင်
1 လွှာယက်မဟုတ်သော + 1 လွှာ PE ရုပ်ရှင်
8၊ 12၊ 17၊ 48 တွဲများမပါရှိပါ။
* ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏နမူနာနှင့်တောင်းဆိုမှုများအရ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသတ်မှတ်ချက်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ယခင်- တစ်ခါသုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံးများ ခွဲစိတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံးများ
နောက်တစ်ခု: တခါသုံး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ချည်ဘောလုံး ပိုးမွှား 100% စစ်မှန်သော ချည်သား .စုပ်ယူနိုင်သော အရည်အသွေးမြင့် စက်ရုံမှ ချည်သားလုံးများ
သက်ကြီး သူနာပြု Pad
Anti-Blood Penetration Pad
မျက်နှာကဲ့သို့ Mask, Mask အလုပ်, Fda ဖြင့် တခါသုံး Mask ၃ လွှာ, တစ်ခါသုံး Half Mask အသက်ရှူကိရိယာ, Ffp1 တစ်ခါသုံး Mask,3Ply တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံး,